भान्सा क्याबिनेट र Color्ग संयोजन - Kitchen Cabinets Color Combination
Home भान्सा क्याबिनेट र Color्ग संयोजन
भान्सा घर तपाईंको घरको अभिसरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो; दुबै तपाईंको सन्तुष्टि र पुन: बिक्रिको लागि। त्यसैले तपाईंको भान्छाको कपाटहरूको लागि सही शेडिंग उठाउनु आधारभूत हो। धेरैले पुनः डिजाइन गर्दै छन् वा फ्लोर योजनाहरू छनौट गरेका छन् जुन किचनलाई नियमित जोनमा समावेश गर्दछ, र प्राय: त्यहाँ कुनै खास भान्छा / खाने / पार्लर क्षेत्रहरू हुँदैनन्। ब्यूरो शेडिंग छनौट बनाउने दिमागको राज्य सेट गर्ने र तपाईंको अत्यावश्यक निवास स्थानमा खुशी दिनको लागि एक महत्त्वपूर्ण अंश। हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, तपाईंको भान्छाको लागि सही सेडि choosing छनौट गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ जसमा कसैले सोचेको हुँदैन। यसले नियमित रूपमा सम्पत्ति धारकहरूलाई भेनिला रोज्न ड्राइभ गर्दछ।
किन तपाइँ तपाइँको क्याबिनेटहरु को लागी एक गैर गैर-पार्टिसियन र Color प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ
धितो धितो राख्नेहरु बाहिर तटस्थ बाहिर सोच्न अनिच्छुक छन् (म पछि एक ब्लग रचना गर्नेछु अविश्वसनीय निष्पक्ष किचन अलमारी शेडिंग छनौट गर्न सबैभन्दा प्रवीण विधिमा) किनभने तिनीहरू आशंकित छन् यसले पछि पुन: सम्मान सम्मानलाई प्रभाव पार्न सक्छ। घर बेच्नको लागि एउटा असाधारण किचनको महत्त्वको परिणामस्वरूप तिनीहरू विशेष रूपमा किचनको अलमारी रंगमा हिचकिचाउँछन्। वास्तवमा, किचन भनेको खरीददारहरूको लागि मुख्य चिन्ता हो।
व्यापारीहरू नियमित रूपमा कल्पना गर्छन् कि अफ मौकामा उनीहरूले आफ्नो घर बनाउनको लागि जोडदार रूपमा जोड दिइरहेका छन् कि त्यहाँ यसको लागि बढी उत्साह हुनेछ। परम्परागत तर्क मनाउने छ कि अधिक सम्भावित खरीददारहरु को अधिक महंगा दर एक व्यापारी को लाग्नेछ। कुनै पनि केसमा, यो बराबरीमा व्यापक बराबर आधारित पद्धति प्रयोग गरी बजारमा पहुँच योग्य योगदानहरूको मात्रालाई विचार गर्न बेवास्ता गर्दछ। यस तथ्यको सत्यता यो हो कि निष्पक्ष हुनुको मतलब यो हो कि सम्भावित खरीददारहरूको अधिक व्यापक आधार हुनेछ, त्यहाँ त्यस्तै छनौटहरू पनि हुनेछन्।
ठूलो संरचना ठूलो योजना हो; र यो मनमा राख्दै कि विभिन्न र h्गहरूले कम व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दछ यसले ती व्यक्तिहरूलाई बढी गहन तहमा सम्बोधन गर्दछ। तपाईं त्यस्तै व्यक्तिहरूको दिमागमा विरलै कुनै पनि छनौटको बिरूद्ध जाँदा फाइदा हुन्छ; र यो त्यस्तो माध्यम हो जुन तपाईं थपको लागि आफ्नो घर बेच्नुहुन्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईं आफ्नो भान्साकोठामा बुज्रुर हुनुहुन्छ त्यसैले सेडि select चयन गर्नुहोस् र तपाईंलाई उत्साहित पार्नुहुन्छ। के गर्न को लागी सेट गर्नुहोस् अन्यहरू पक्का छैनन्। सबै क्षेत्रहरू एक फर्म संरचना उद्देश्यको दिशामा प्रगति गर्नुपर्छ। महान संरचना को लागी एक अंग मा बाहिर जाँदै, बाटो ड्राइभिंग, र तपाइँको आफ्नै शैली को लागी तपाइँको खोज मा हड्ताल संग जोडिएको छ।
चाखलाग्दा क्याबिनेटहरूको लागि र Color्ग छनौट गर्दा रोचक पोइन्टहरू
धेरै जसो अवस्थाहरूमा हामी भन्छौं कि “घरले छायांकन छनौट गर्दछ” र राम्रो सेडि choice्ग छनौट शेडिंग डिस्पोजेसनको बारेमा बढ्दो छ, कुनै पनि घटनामा जब प्रक्रियाको सुरूवात गर्दा।
चीजहरू विचार गर्नुहोस् जुन परिवर्तन हुनेछैन। हुनसक्छ तपाईं आफ्नो हालको लेज / पछाडि स्प्रिleल र एन्ट्रीवे उपकरणहरू साकार गर्नुहुन्छ वा तपाईंसँग जडान गर्ने कोठामा केही ढु stone्गाको काम वा ईट्टाको काम छ। तपाईंले एक सेडि choose छनौट गर्नु पर्छ जसले यी परिवर्तनरहित स्थापनाहरूको प्रशंसा गर्दछ। कोठाको प्रकाशले डिभाइडर्सको छायामा पार्ने असरको बारेमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ। के यो चरित्र प्रकाश हो?
चमकदार? फ्लोरोसन्ट? दुईको मिश्रण ?. लाइटिंगले छायांकन कसरी देखापर्छ भन्नेमा प्रभाव पार्छ, र प्रकाश दिनको र रातको अवधिको लागि पनि देखा पर्नेछ प्रकाशको मिश्रणको रूपमा।
तपाइँको छायांकन को एक विशाल प्रतिनिधि मामला दिन को लागी एक उदाहरण एन्ट्रीवे लगातार गर्नुहोस्।
यस बिन्दुमा तपाईंले सम्भवतः बुझ्नुभएको छ कि कुनै मूल्यवान् मूल्यमा तपाईंको भान्साको घरलाई परिवर्तन गर्न (र विभिन्न दृष्टिकोणबाट तपाईंको घर) एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण भनेको तपाईंको भान्साको कपाटहरू चित्रकारी गर्नु हो। यो साधारण १० बर्ष भन्दा अघिको कुरा हो कि म्यापल र ओक रol्गलर्ड कपाटहरू सबैभन्दा चर्चित निर्णय थियो तर पेंटिंग कपाटहरू द्रुत रूपमा मानकमा परिणत भएको छ।
हामी क्लीभल्याण्ड, ओएच जोनको किचन कपाट (र नुहाउने कपाटहरू, र यस्तै) को एक धेरै सम्झौता पुन: सरफेस गर्छौं र हामीले प्राप्त गरेको सबैभन्दा व्यापक मान्यता प्राप्त पूछताछ मध्ये एउटा भनेको छनौटको लागि हो। यहाँ हाम्रो मनपर्दो मोडेलहरूको एक अंश (सबै आफ्नै कामबाट) तपाईलाई तपाईंको घरको लागि उत्तम के छनौट गर्न सक्षम गर्न स्पष्टीकरणको साथ छन्। यदि तपाइँलाई पुनः याद गर्न मन पर्दैन भने, कुनै पनि पेन्ट सेडि pic उठाउँदा कि कोठामा विभिन्न र hहरू बहुमतले के उत्तम देखिन्छ भनेर प्रभाव पार्छ। एउटा छायांकन अर्को व्यक्तिको भान्छामा अविश्वसनीय लाग्न सक्छ तर तपाईको होईन।
सेतो अहिलेसम्म सबैभन्दा प्रख्यात सेडि is हो किनकि यो कुनै घटनामा years बर्ष वा कहीं वरपर भएको छ। एउटा कारण सेतो यस्तो मुख्यधाराको शेडिंग आधारमा छ कि यसले किचन पपमा विभिन्न र different्गको बहुमत बनाउँछ, (उदाहरणका लागि, डिभाइडर र काउन्टरहरू)। सेतो पेन्टेड कपाटको कारणले गर्दा सानो किचन ठूलो देखिन्छ डिभाइडर्सलाई पेंटिंग गर्ने जस्तो हल्का सेडिंगले गर्न सक्छ।
ग्रेसन / क्रीम पेन्टेड क्याबिनेटहरू
दोस्रो सबैभन्दा प्रचलित ब्यूरो शेडिंग एक खैरो वा क्रीम हो। धेरै घरहरूमा भान्छाको कपाटहरूमा चम्किलो सेतो छायांकन अत्यधिक भव्य हुन सक्छ। यो नियमित तवरले परिस्थिति हो यदि घरमा ट्रिमको बाँकी भाग खैरो छ वा यदि काउन्टर वा भान्छाको सतह शेडिंग दायराको न्यानो छेउमा छ भने। उदाहरण को लागी, तपाइँको काउन्टरहरु को एक गाढा र colored वा पहेलो टोन को एक टन छ कि घटना मा, एक बिंदु मा एक खैरो छायांकन एक असाधारण प्रशंसा हुन सक्छ।
छायांकन कार्यहरू प्रशंसनीय (र अझ बढि देखिन्छ) यस भान्सामा बिभिन्न रंगका कारण। किनभने विभाजक हरियो छाया र बैकस्प्लाससँग एक टन गाढा र colored्गको टोनहरू छन्, यस खैरो रंगको छायाँले उनीहरूलाई राम्रोसँग प्रशंसा गर्दछ।
चित्रकारी भान्सा क्याबिनेट ग्रे
डिम डिभाइडर शेडिंगका लागि सबैभन्दा प्रख्यात शेडिंग परिवार हो, यद्यपि यो तपाईको भान्छाको कपाटहरूका लागि उत्तम शेडिंग हो? यो पक्कै पनि एक प्रमुख निर्णय हो तथापि यो सेतो र खैरो भन्दा बढी ‘लोकप्रिय’ हुन सक्छ। त्यस्तै कुनै पनि छायांकन संग यो वास्तव मा फर्श र ledges रूपमा तपाईंको adering को शेष मा निर्भर गर्दछ। हल्का मधुरो र मधुरो अँध्यारो दुबै कपाटहरूका लागि प्रख्यात छन्। एक सुस्त डिम विशेष कपाटको केही मात्रमा विशेष गरी तीब्र हुन सक्दछ, उदाहरणका लागि, टापुमा चित्रण गर्ने वा केवल तल्लो कपाटहरू जुन छायांकनको लागि।
निलो पेन्टेड किचन क्याबिनेटहरू
यदि तपाईंसँग अहिलेसम्म तपाईंको भान्साकोठाँमा एक टन डिम र सेतो छ भने, तपाईंको कपाट रंग्नको लागि एक अविश्वसनीय विकल्प डिम नौसेना बल निलो हुन सक्छ। यो सबै भन्दा राम्रो अलमारी को एक हिस्सा मा राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ तर अझै एक रमाईलो जोड र अभिसरण को बिन्दु हुन सक्छ। यो निस्सन्देह सबैको लागि होईन र years बर्षमा राम्रोसँग चिनिन बाध्य छैन वा यद्यपि वर्तमान समयमा (२०१ in मा) यो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत विकल्प हो।
किचन क्याबिनेटका लागि हरियो रंग
एउटा अन्तिम छायांकन छनौट हरियोको छाया हो। नौसेना बल निलो जस्तै, यो एक बढ्ता स्टाइलिश विकल्प हो जुन एकलले विशिष्ट घरहरूमा काम गर्दछ। यो सेडि अझ बढी तातो टोनका साथ घरमा काम गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, बेजको शेडहरू। यो अतिरिक्त सम्भाव्यता स्पष्ट सेतोको भन्दा सीमान्त धनी खैरो संग उत्तम काम गर्दछ।
आदर्श रूपमा यो लेखले तपाईंलाई तपाईंको भान्छाको कपाट चित्रकला उद्यम डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ पहुँचयोग्य असामान्य विकल्पहरूको एक टन छन् र तपाईको लागि सबै भन्दा राम्रो एक साँच्चिकै तपाईको आफ्नै स्वाद र तपाईको भान्छामा बिभिन्न रंगहरूमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईं क्लिभल्याण्ड जोनमा बस्नुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई तपाईंको भान्छाको कपाटहरू चित्रित गर्ने बारेमा कुरा गर्ने मौका मनपर्नेछौं। तपाईं हाम्रो क्याबिनेट पेन्टि page पृष्ठमा हाम्रो प्रक्रियासँग परिचित हुन सक्नुहुन्छ।